Qaar ka mid ah Amarada Aasaasiga ah Qofkasta oo Newbie ah waa inuu barto | Laga soo bilaabo Linux
Shaki kuma jiro terminalku waa aalad loo baahan yahay in isticmaale kasta oo Linux ahi mar uun adeegsado, laga dhaafi maayo. In kasta oo aysan ahayn qalab qasab ah in la isticmaalo, haddana weli cabsi weyn ayey u tahay dadka ku cusub Linux.
Sidaa darteed waa markaa waxaan la wadaagayaa qaar ka mid ah amarrada aasaasiga ah ee adeegsadayaasha ku jira terminaalka iyo inaad wax ka baran karto sidii wax dheeraad ah oo khibradaada Linux ah. Amaradaani waa iskudubarid kaliya waxa ugu caansan ee aad awoodid inaad adeegsato.
Este waa amarka ugu muhiimsan dhamaan, tan iyo amar kasta oo u baahan rukhsad ruqso u baahan tan sudo Command.
Qaabka loo adeegsado ayaa ah waa in loo adeegsadaa kahor amar kasta oo u baahan rukhsad rujin.
Tusaale ahaan, si aad u hesho rukhsad adeegsi super ah:
Amarkan Waa aasaas maxaa yeelay waa midka aad u isticmaasho beddelka galka, isticmaalkeedu waa mid aad u fudud. Kaliya ku qor magaca galka aad rabto inaad ka gasho galkaaga hadda.
Tusaale, waxaan ku jiraa faylkeyga shaqsiyeed waxaanan rabaa inaan galo galkeyga Downloads
Haddii aan rabo inaan dib ugu laabto tusaha hore waxaan kaliya ku darayaa ...
Amarkan Waxay ku xiran tahay cd, maxaa yeelay ls waxaad ku qori kartaa dhammaan faylasha iyo fayllada ku jira gudaha galka halka lagaa dhigay mana ku koobnayn intaas laakiin waxaad sidoo kale liis garayn kartaa kuwa ku jira fayl kale adigoon ku dhex jirin.
Tusaale, waxaan rabaa inaan arko galka ay ka kooban tahay galka shaqsiyadeed sidaa darteed kaliya waan qoraa
Aniguna waxaan heli doonaa liiska ku jira galka meesha aan ku yaal:
Hadda haddii aan doonayo inaan arko waxa ku jira buuggaagta kale, tusaale ahaan, waxa ku jira galka dukumintigeyga oo waan ogahay inay jiraan fayl la yiraahdo mashruuc waxaan doonayaa inaan arko waxa ku jira:
Amarkan ayaynu ku haysan karnaa suurtagalnimada in la sameeyo tilmaamno ama hagaha halka aan ku jirno ama meel kale, kaliya waa inaan qeexnaa wadada.
Tusaale, waxaan rabaa inaan ku abuuro galka magaca 1 iyo mid kale oo gudaha ku jira oo leh magaca 2
La mid kii hore oo keliya tani waxay noo ogolaaneysaa inaan abuurno feyl madhanSi la mid ah, tan waxaa lagu sameeyaa galka hadda jira ama jidka aan tilmaamno.
Tusaale, waxaan rabaa inaan abuuro feyl qoraal ah:
Nuqulada iyo dhajinta waa howsha muhiimka ah ee ay tahay inaan sameyno si aan u abaabulno feylashayada. Isticmaalka cp ayaa kaa caawin doona inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhajiso faylka saldhiga. Marka hore, waa inaan go'aansanno feylka aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno oo aan galno meesha loo socdo si aan faylka ugu dhajino.
Halkan waxaa muhiim ah in la muujiyo feylka ama galka la koobiyeyn doono iyo sidoo kale wadada halka koobiga la dhigi doono.
Este waa amar ah in la tirtiro faylasha iyo tilmaamaha. Waad isticmaali kartaa -f haddii feylku u baahan yahay ruqsad xidid in laga saaro. Oo weliba waxaad isticmaali kartaa -r inaad ku sameyso tirtirid dib u soo celin ah si aad u tirtirto galkaaga.
Waa muhiim, aad ayey muhiim u tahay in fiiro gaar ah loo yeesho adeegsiga amarkan maadaama maadaama aad qeexi karto jidadka, waad joojin kartaa tirtirka fayl muhiim ah nidaamkaaga.
Isticmaal ahaan, waxaad badanaa u baahan tahay inaad aragto qaar ka mid ah qoraalka ama koodhka qoraalkaaga. Hagaag, amarkan aasaasiga ah ee Linux ayaa ku tusi doona qoraalka ku jira faylkiisa. Amarkani wuxuu la socdaa ls tan iyo markii aad sahamin karto waxa faylasha aad ku qorto ls ay ku jiraan.
Tusaale, waxaan rabaa inaan arko waxa faylka Lists.txt ka kooban yahay
Iyo amarkii ugu dambeeyay waxaa loogu talagalay nidaamka xiritaanka. Mararka qaarkood waxay u baahan yihiin inay si toos ah uga gooyaan xaruntooda. Amarkani wuxuu qaban doonaa shaqada guriga.
Adigoon ku sii dheeraanin waxaad ogaan kartaa amar kasta iyo xuduudaha kaa caawin kara inaad hagaajiso isticmaalka mid kasta oo ka mid ah, waxaan kaliya ku darnaa-ka caawinaa kuwaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Qaar ka mid ah Amarada Aasaasiga ah Qofkasta oo Newbie ah waa inuu barto
Fikradayda hoose, amarka MAN aad buu uga muhiimsan yahay SUDO maaddaama xitaa haddii aanaan haysan internet, ugu yaraan waan ogaan karnaa buugga amarrada iyo dukumiintiyada nidaamka oo noqon doona caawimaad weyn inaan awoodno isticmaalkeeda.
Jawaab ku samee YiZuX